WordPress 2.1 waa kan ... Hmmmm | Martech Zone
Talaado, Janaayo 23, 2007 Talaado, Janaayo 23, 2007 Douglas Karr
Xeerbeegtida ayaa soo baxday… Waxaan sugayaa kuwa kale inay ku mashquulaan WordPress 2.1 laakiin waa tan hordhaca ah:
Farxad ayay u bixiyeen qaar ka mid ah xulashooyinka menu - blogroll ayaa ka macno badan xiriiriyeyaasha iyo faallooyinka ayaa ka wanaagsan doodaha.
Waxaan kujiraa OSX waxaanan isku dayay 3 daalays, Safari, Camino iyo Firefox 2 mana jiro cid ii ogolaan doonta inaan daalacdo sawirada aan soo galiyay. Cusboonaysiinta: Sidoo kale isku dayay Internet Explorer 7 oo ku jirtay Windows XP isla markaana isku arrin ayay ahayd
Ummmm… hubi inaad dami kartid waxyaabahaaga cusub ka hor casriyeynta. Ooops site degelkeygu wax qurxoon ayuu halkaas ku sugnaa saacad ama wixii la mid ah sidii aan ku sameeyay dib u dhiska.
Ma aanan haysan hal shey oo jabsaday… laakiin waxaan dib u hawlgeliyay mid kasta si aan dib ugu helo goobta.
Maamulku wuxuu umuuqdaa mid yara caajis ah… aniga uun buu noqon karaa. Waan jeclahay shaqada badbaadinta gawaarida !!!
Haddaan dhagsiiyo maamul Uploads screen shaashad madhan sidoo kale.
Maxaad u maleyneysaa ragga Awoodin la'aanta iyo daarista sawirada runtii way i dili doontaa. (Waan awoodaa inaan iyaga soo raro dhibaato la'aan). Ma cusbooneysiinayo macaamiil ilaa aan maqlo wax badan.
Firefox Hack: Ku Raadso Bloggeyga adoo adeegsanaya Keymarks
Waxaan hayaa cusbooneysiinta muddo yar illaa aan maqlo wax badan. Waxaan horey u akhriyay dhowr sheeko oo casriyeyn ah oo cabsi leh oo ku saabsan waxyaabo badan oo aan shaqeynin.
Xitaa ma gali karo Maamulka hadda. Waa inaan sameeyaa xoogaa tirtirida plugin ah si aan u arko haddii taasi caawiso.
Jan 25, 2007 saacadu markay ahayd 3:21 PM
Kaliya cusbooneysiin… waxay umuuqataa inay jireen shaqooyin qaas ah oo mawduucayga kujira oo aan sifiican ugulaabanaynin wax kabedelka keydka.